Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi I-Fikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Football eliyaziwa kakhulu ngesiteketiso "Fik“. Indaba yethu yeFikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
I-Fikayo Tomori Ingane Yendaba Yasebuntwaneni - Ukuhlaziywa Kuze Kube Manje. Isikweletu ku-IG
Ukuhlaziywa kuhilela impilo yakhe yobusha, isizinda somndeni, imfundo / umsebenzi okwakha umsebenzi wakhe, impilo yakhe yokuqala yokusebenza, indlela eya endabeni yodumo, ukukhuphuka kudumo lendaba, ubudlelwane, impilo yomuntu siqu, indlela yakhe yokuphila, impilo yomndeni njll.
Yebo, wonke umuntu umbona njengalowo osebenza ngokuphelele futhi ongawenzi amaphutha futhi ongubani UFrank Lampard ujabule kakhulu. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biology kaFikayo Tomori ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso weFikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Kuqala, amagama akhe aphelele ngu-Oluwafikayomi Oluwadamilola Fikayo Tomori. UTomori, njengoba evame ukubizwa kanjalo, wazalwa ngosuku lwe-19th ngoDisemba 1997 edolobheni eCalgary, eCanada. Ngezansi isithombe sikaFik omncane nonina omuhle lapho esengumntwana. Ngokusho kwesithandwa seChelsea, lesi sithombe siseNigerian kakhulu.
UFikayo Tomori uphethe ingane yakhe okwenzeka ukuthi kungoFik. Isikweletu ku-IG
UFikayo Tomori wazalwa njengomntwana wokuqala futhi eyindodana kuphela kubazali bakhe abathandekayo uMnu noNkk Oluwadamilola Tomori abanomndeni wabo odabuka e-Osogbo, esifundazweni sase-Osun, eningizimu ntshonalanga neNigeria. Ngaphambi kokuzalwa kwakhe, abazali bakaTomori bahlala okokuqala eLagos, eNigeria ngaphambi kokuthuthela eCanada lapho babehlala khona. Bobabili abazali babonakala njengasekupheleni kweminyaka yabo ye-40 njengasesikhathini sokubhala.
UFikayo Tomori wafanekisa nabazali bakhe.
Ingemuva Komndeni: UFikayo Tomori udabuka emndenini osezingeni eliphakeme, lowo umcebo wakhe uboshelwe hhayi ebholeni kuphela, kodwa emndenini wakhe onamalungu anamandla kwezepolitiki eSouthwest Nigeria. Uthi bewazi?… ilunga elilodwa leTomori lalandisa abendlu ngamagama; U-Otunba (uNkk) uGrace Titilayo Laoye-Tomori, MPA, BA, PGDE wayengowesekela-Mbusi wezwe lase-Osun, eNigeria.
U-Aunt ka-Fikayo Tomori ocebile- u-Otunba uGrace Titi uLaoye Tomori. Isikweletu ku-OliveBranch
Emuva empilweni yakhe yakuqala !. Ngemuva kokuhlala iminyaka eyisikhombisa eCanada, abazali bakaFikayo Tomori babona isidingo sokuvezwa isiko elisha kanye nokushintshwa kwemvelo. Abazali bakhe bafuduka nendodana yabo besuka eCalgary baya eLondon, e-United Kingdom.
Amaqiniso weFikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ngenkathi eseLondon ngonyaka we-2004, uFikayo Tomori wafunda esikoleni esimnikeze ithuba lokudlala ibhola ngenkani ngezikhathi zokuncintisana. Lokhu kwaholela ekutheni abe nentshisekelo yokuthola umsebenzi azowenza.
Ngonyaka u-2004 waphinde wabona i-Chelsea FC eyakhiwe kabusha yabusa ibhola le-English ngiyabonga Okhethekile owathandayo ama-Afrika njengoDidier Drogba. Wonke amalungu omndeni wakhe asekela iklabhu futhi UTomori uqobo wayenecebo lakhe siqu. Wazenzela umfutho ngokufuna ukuba yilungu lesikhungo sokufundela ikilabhu laseLondon.
Okwakhe, indlela ephumelela kakhulu yokuthola isivivinyo kuChelsea FC Academy ukujoyina iSikole sebhola lebhola laseChelsea. Ngenkathi elapho, ama-scouts amkhetha phakathi kwabadlali abancane futhi bamenyelwa izivivinyo esikhungweni sokuthuthukiswa kweChelsea FC.
Amaqiniso weFikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
UFikayo Tomori ujoyine i-Chelsea FC academy ngonyaka we-2001 njengengane eneminyaka eyisikhombisa. Lapho ejoyina, wathunyelwa ezingeni leklabhu elingaphansi kwe-8. UTomori uzulazule ngempumelelo indlela yakhe ngokusetha kwentsha yeChelsea, ekhuphuka ngokushesha kakhulu emabangeni akhe onke.
Uthi bewazi?… UFikayo Tomori ngenkathi esemncane neChelsea academy waqala ukuba nesibopho nalowo owayedlala naye esikoleni, UTammy Abraham owayengabangane bakhe abakhulu. Ngezansi isithombe sabo bobabili abangane ngesikhathi seminyaka yobuntwana babo neChelsea FC academy.
UFikayo Tomori Impilo Yomsebenzi Wasekuqaleni. Isikweletu ku-bpi naku-IG
Isikhathi sendiza!. Ubungani babo buthuthukela eminyakeni yabo yobusha njengoba kuboniswa ngezinombolo zabo zehembe. Bobabili kusenesikhathi, babephupha amaphupho abo okufinyelela esicongweni somsebenzi wabo, iqembu eliphakeme. Ubungani babo bungafaniswa nobuka Mason Mount futhi Declan Rice.
Amaqiniso weFikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
Unyaka we-2015 kanye ne-2016 waba yisikhathi sokuguqula umsebenzi wobusha bukaTomori. Usize iqembu labasha le-Chelsea ekuqopheni emuva emuva ekuwineni emuva emuva ku-UEFA Youth League ne-FA Youth Cup. Ukukhombisa ukuthi muhle kanjani, uTomori ushaye amagoli womabili futhi waqokwa njengomdlali we-2016 weCarsea FC yonyaka.
Indaba yokuphumelela kwentsha kaTomori ayiphelanga lapho njengoba impumelelo iqhubeka. Ku-2017, Usize iqembu lakhe laseNgilandi U20 ekunqobeni iNdebe Yomhlaba ye-FIFA U-20 okokuqala emlandweni wabo emcimbini owenzeka eSouth Korea.
Fikayo Tomori Road to Fame Indaba
Futhi, enye impumelelo yentsha elandelayo ngonyaka olandelayo i-2018. Ngalesi sikhathi, wasiza uhlangothi lwakhe lwaseNgilandi U21 ukuwina iToulon Tourmet. Phezu kwakho konke lokhu okufeziwe, bebesenovalo engqondweni kaTomori. Manje ake sikutshele ukuthi kungani.
Kungani Ukwesaba ?: Kubhalwe kahle ukuthi i-Chelsea FC iyalithanda uhlelo lokubolekwa kwemali ethweswe iziqu zayo, futhi bayenqena ukuyidlala eqenjini lokuqala. Lesi yisizathu esenza ukwesaba kufake izingqondo zazo zonke izinkanyezi ze-academy okwamanje zibhekwa njengezivuthiwe eqenjini lokuqala.
Njengomdlali ophothule izifundo zakhe, ukwesaba kukaTomori kweza kuye kwamzingela. Yena kanye nomngani wakhe omkhulu uTammy Abraham akasitholanga isikhathi esanele somdlalo. Zithunyelwa kwamanye amakilabhu ukuze zithole isipiliyoni. UTomori waba yilungu elisha lomkhosi wemalimboleko weChelsea FC yize ayengomunye wabahamba phambili eminyakeni yakhe yokufunda.
Amaqiniso weFikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
Emzameni wokuthola isikhathi segeyimu nesipiliyoni, uTomori watholwa nguLoan UFrank Lampard ngaleso sikhathi owayesenkolweni yokuhlasela amabutho abolekela iChelsea ngemuva kokuqokwa kwakhe njengomphathi weDerby County. U-Lampard uthole uTomori kwisisekelo semalimboleko athembekile.
UFikayo Tomori ekugcineni uthole impumelelo eqenjini lokuqala leDerby County. Ufike washaya phansi egijima lapho nje efika ePride Park, ebasiza ukuba bafinyelele kumdlalo wamanqamu we-Championship.
Uthi bewazi?… Isizini evelele kaTomori ayibonakalanga. Waqanjwa igama Umdlali WeDerby Wonyaka ekupheleni kwesizini yakhe yokuqala neklabhu. Lokhu kwamtholela irekhodi lekilabhu lokuba ngumdlali wokuqala wemalimboleko ukuzuza lo mklomelo. Ukuthole lokhu ngaphansi kokuholwa yiChelsea FC Legend, UFrank Lampard.
UFikayo Tomori noFrank Lampard ngesikhathi sabo eDerby Voyage. Isikweletu ku-IG
Ubuhlobo phakathi Lampard futhi uTomori akagcinanga lapho. Bobabili umdlali nomphathi baphinde bahlangana eStamford Bridge ngemuva kwesikhathi sabo eDerby. Lokhu kwenzeke ngemuva kokuthi uLampard esikhundleni Sarri ngomsebenzi weChelsea.
Ukwehlulela isizini ye-2019 / 2020, kuyacaca ukuthi uLampard ubheka kakhulu uTomori. Kuyindaba yesikhathi kuphela ngaphambi kokuthi uTomori abe yisenqenqemeni elithandwayo labaphathi nesikhundla semenenja semenenja saseLondon. Iphupho lakhe eliphukile manje selizofezeka futhi abanye, njengoba besho, manje umlando.
Amaqiniso weFikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngokukhuphuka kwakhe udumo, nakanjani abalandeli abaningi baseChelsea babezobuza ukuthi ngabe intombi kabani kaFikayo Tomori ingaba ngubani. Yebo! akunakuphikwa ukuthi ukubukeka kwakhe okumnyama okuhambisana nesitayela sakhe sokudlala bekungeke kumenze abe ngumdiliya ogqamile kwabesifazane.
Abalandeli beChelsea basanda kubuza… .Ngubani intombi kaFikayo Tomori? Isikweletu ku-IG
Ngokusekelwe olwazini olutholakala ekusingatheni imidiya kaTomori, kubonakala sengathi ukhethe ukugxila emsebenzini wakhe (njengalapho kubhalwa). Leli qiniso lenza kube nzima ngathi ukuqoqa noma yiluphi ulwazi maqondana nokuphila kwakhe kobuhlobo noma umlando wakhe wokuthandana.
AgainUFikayo Tomori uyazi ukuthi abalandeli nabaphathi beChelsea bangaxolelwa kakhulu izingane ezisencane ezizayo ezingakwazi ukuhlaba umxhwele, esinye sezizathu esenza ikilabhu ibe nempi yabadlali ababolekayo. Ngakho-ke, kungenzeka futhi ukuthi uTomori abe nentombi kodwa ale ukwenqaba ubuhlobo bakhe naye, okungenani okwamanje.
Amaqiniso weFikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi uFikayo Tomori Personal Life kude nomsebenzi wakhe webhola kuzokusiza ukuthi ube nombono ongcono futhi ophelele wobuntu bakhe obumnyama.
Ukuqala phansi, uFikayo Tomori ungumuntu ongekho emisebenzini yemisebenzi, uzama ukuchitha isikhathi eyedwa futhi angahambi nakho konke efuna injongo yangempela yempilo. UTomori uyakwazi ukuguqula imicabango yakhe ayenze ngezenzo zikakhonkolo, azisebenzise lapho kukhalwa khona umdlalo.
Ama-Fikayo Tomori Amaqiniso Wokuphila Komuntu. Isikweletu ku-IG
Ngokombono wefilosofi, uTomori ngesikhathi sokungezona zomsebenzi wenza ukuthanda ukuxhumana nomhlaba ngebhidi lokuhlangabezana nakho ngangokunokwenzeka.
Amaqiniso weFikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
Uma kuziwa emndenini, uFikayo Tomori uzinikele futhi uzimisele ukwenza cishe noma yini ngokomuntu ukwenza ubaba wakhe, umam kanye nodadewabo omuhle kakhulu wengane. Ngokushesha kwakhe njengoba kubonwe ngezansi komndeni kuphila impilo emnandi kakhulu eLondon ngenxa yempumelelo yabo.
UTomori uphuma nomndeni wakhe. Isikweletu ku-IG
Onke amalungu omndeni ayaziqhenya ngezimpande zawo zokuqala zaseNigeria futhi awanamahloni okukubonisa. Lokhu kubonakala njengoba bobabili ubaba, umama kanye nengane kadadewabo bonke bafuna uFik edlalela iqembu lesizwe laseNigeria. Ngenkathi umama kaFikayo Tomori kanye nomntwana wengane yakhe bephila impilo ephansi ebalulekile, ubaba wakhe uhlanganyela ngqo ekuqhubekeni kwamakhono endodana yakhe.
Isasasa lokubuka iNdodana yakhe: Uthi bewazi?… Ngenkathi eDerby County, uTomori wasiza iqembu lakhe lanqoba iManchester United ekuqothulweni okumangazayo kwiCarabao Cup ngezibhamu ezihlawulwayo. Akekho owayenenjabulo ukwedlula ubaba wakhe owahlehla naphansi ejabule ngenxa yokunqoba kwakhe indodana yakhe enkulu. Bona ividiyo engezansi.
UTomori ngemuva komdlalo uthumele le video kwabezindaba zenhlalo kababa wakhe eqa futhi edansa ngaphesheya kwegumbi lokuhlala lomndeni.
Amaqiniso weFikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - LifeStyle
UTomori njengangesikhathi sokubhala unemakethe Inani le-7 amakhilogremu okusho ukuthi lenyuke. Ukuthola ukubaluleka ngale ndlela akusho ngandlela thile ukuhumushela empilweni yobukhazikhazi, obonakala kalula yizimoto ezimbalwa ezingafani nalokhu, izindawo ezihlala kuzo kanye nokulwa okusindayo.
Amaqiniso weFikayo Tomori LifeStyle
KuTomori, kuhlale kunemali eyanele yokuphila impilo ejwayelekile. Futhi, ukukwazisa, impumelelo yakhe yezezimali ayiboshelwe ngokuqondile ekusebenzeni kwakhe njengomdlali webhola ongahlulela ukuthi uvela emndenini ocebile.
Amaqiniso weFikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
I-1997, unyaka ka-Tomori wazalwa kukhishwa i-movie yeDrama / Disaster enesihloko esithi "Titanic" esisaqhubeka nesinye sezindaba ezihehisayo emlandweni.
I-1997 kwaba unyaka uTitanic akhishwa ngawo.
Ngawo lowo nyaka i-1997 futhi yaphawula ukushona kwenkosazana yabantu izwe elabizwa ngayo ngokuthi "UDynasty Di“. U-Late Princess Diana oboniswe ngezansi wabulawa eParis, engozini yemoto ngenkathi ilandelwa yi-paparazzi.
Princess Diana Washona ngonyaka 1997. Ikhredithi ku-Daily Express
Ama-honors kanye nemiklomelo: UTomori ungomunye walabo ababambe iqhaza lebhola lentsha asebenze kakhulu kuwo wonke amaqembu abewadlalela, eqoqa iziqubu eziningana nokuhlonishwa okukodwa njengoba kubonwe ngezansi ngesikhathi sokubhalwa.
Fikayo Tomori Amarekhodi kanye Honours in Summary. Ikhredithi ku- Ilanga
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iFikayo Tomori Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-Callum Hudson-Odoi Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold Biography Facts
I-Kepa Ingane Yendaba Yobuningi Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Septhemba 14, 2020
U-Antonio Rudiger Ubuntwana Bombhalo Plus Untold Biography Facts